Hlola iMalaysia - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eMalaysia.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMalawi
Bukela ividiyo mayelana neMalaysia
Hlola iMalaysia izwe eliseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, engxenyeni ethile yezwe lase-Asia futhi ingxenye engxenyeni yesithathu yesiqhingi saseBorneo. IMalaysia ingxube yezwe lesimanje kanye nesizwe esithuthukayo. Ngokutshala kwayo ezimbonini zobuchwepheshe obuphakeme nomnotho olinganiselayo olilinganiselwe, iye yaba ngenye yamazwe acebile eSoutheast Asia. IMalawi, yabavakashi abaningi, iveza ukuxubana okujabulisayo: kukhona ingqalasizinda yobuchwepheshe obuphakeme futhi izinto zivame ukusebenza kahle futhi ziningi noma zincane ngesikhathi esimisiwe, kepha amanani entengo ahlala elungile kunokuthi, Singapore.
Ngaphambi kokuqhamuka kombuso wamakoloni wase-Europe, inhlonhlo yaseMalay kanye neziqhingi zaseMalay kwakuyikhaya amakhosi afana neSrivijaya, iMaapahit (bobabili babuswa kusukela e-Indonesia, kodwa futhi belawula nezingxenye zaseMalaysia) neMelaka Sultanate. Imibuso yamaSrivijaya neMaapahit yabona ukusakazeka kobuHindu kule ndawo, futhi kuze kube namuhla, izinganekwane namasiko amaningi amaHindu ayaqhubeka namasiko endabuko yamaMalay.
IMalawi ngumphakathi onamasiko amaningi. Ngenkathi iMalay yakha iningi lama-52%, kukhona nama-27% amaChinese, ama-9% amaNdiya kanye neqembu elixubile le-13.5% "abanye", njengeqembu lamaPutukezi eMelaka nase12% yabantu bomdabu (i-Orang Asli). Kukhona futhi inkolelo-mbono yezinkolo nezenkolo, kanye ne-Islam, ubuKrestu, ubuBuddha, ubuTao, ​​ubuHindu, ubuSikhism kanye nobukholwa kumephu.
Enye yezimpawu ezibalulekile zesiko laseMalawi ukugubha kwayo imikhosi nemicimbi ehlukahlukene. Unyaka ugcwele imisebenzi enemibala, ethokozisayo futhi ethokozisayo. Ezinye ziyinkolo futhi zinesizotha kodwa ezinye ziyimicimbi ejabulisayo, ejabulisayo. Isici esisodwa esijabulisayo semikhosi ephambili eMalaysia isiko 'lendlu evulekile'. Yilapho abantu baseMalaysia begubha umkhosi bemema abangane nomndeni ukuthi beze emizini yabo bezodla nobudlelwano bendabuko.
Amanye amaholide amakhulu afaka uNyaka oMusha waseChina (cishe ngoJanuwari / uFebhuwari), iDigavali noma iDiwali, umkhosi wamaHindu wezibani (cishe ngo-Okthoba / Novemba), iholide lamaBuddha le-Wesak (cishe ngoMeyi / Juni), noKhisimusi (25 Disemba).
Isimo sezulu eMalawi sishisa kakhulu.
IMalaysia iseduze nekhwetha, ngakho-ke isimo sezulu esifudumele siqinisekisiwe. Amazinga okushisa ngokuvamile asuka ku-32 ° C ntambama aze afike ku-26 ° C phakathi kwamabili. Kepha njengamazwe amaningi aseNingizimu mpumalanga ye-Asia, izinsuku zaseMalawi ezikhanya ilanga ziphazanyiswa inkathi yeMonsoon kusuka ngoNovemba nangoFebhuwari njalo ngonyaka, futhi amazinga okushisa ebusuku angangena phansi cishe ngo-23 ° C ngezinsuku zemvula.
Uhlangothi olwakhiwe ngokwengeziwe lwePeninsular Malaysia, kanye nezifunda zaseKedah, Malacca, Negeri Sembilan, uPenang, uPerak, uPeris kanye neSelangor, kanye namaFederal Territories amabili; Idolobha elikhulu laseMalawi Kuala Lumpur nesikhungo esisha sokuphatha sasePutrajaya, esikhona ngaphakathi kulesi sifunda. Iningi labantu abangamaChinese bahlala ohlangothini lwaseNtshonalanga.
NgamaSulumane ngokwendabuko amaningi, iziqhingi lapha ziyigugu elicwebezelayo elishisayo. Yenziwe ezifundeni zaseKelantan, Pahang naseTerengganu.
Kuhlanganisa izwe elilodwa nje kuphela, iJohor, izindawo ezigudle ulwandle ezimbili, namahlathi angasoze anyama kawoyela.
Amanye ama-800 km ukuya empumalanga yi-East Malaysia (Malaysia Timur), ethatha ingxenye yesithathu yesiqhingi saseBorneo, kwabelwane ngayo ne-Indonesia neBrunei encanyana. Ngokwengxenye embozwe ehlathini ongenakufinyeleleka kulo lapho izinhloko-mibhalo zizulazula (kumanethiwekhi we-GSM uma kungenjalo), i-East Malaysia inothile ngemithombo yemvelo kepha indawo enkulu kakhulu yaseMalawi imboni, futhi igxile kakhulu kunobuningi kunokuvakasha komuntu ngamunye.
Ukutshontshelwa kwe-Superb scuba eSipadan Island kanye nokuntywila emanzini e-Mabul, izindawo zemvelo, indawo ebumbene kaLabuan, kanye neNtaba iKinabalu enamandla.
Amahlathi, amapaki ezwe, nezindlu ezinde zendabuko.
Kuala Lumpur - inhlokodolobha enamasiko amaningi, ikhaya lePetronas Towers
IGeorge Town - inhloko-dolobha yamasiko nezindawo zokudla ePenang
Ipoh - inhloko-dolobha yasePherak enedolobha elidala lamakoloni
UJohor Bahru - inhloko-dolobha yaseJohor, nesango eliya eSingapore
Kuantan - inhlokodolobha yasePahang, kanye nesikhungo sezentengiselwano ogwini olusempumalanga
IKota Kinabalu - eduzane neziqhingi ezishisayo, ihlathi elinemvula neNtaba iKinabalu
Kuching - inhlokodolobha yeSarawak
IMalacca (Melaka) - idolobha elingumlando laseMalaysia elinokwakhiwa kwendlela yamakoloni
Miri - Idolobha eliyisetshenziselwa kabusha iSarawak kanye nesango lokungena e-UNESCO World Heritage Site Gunung Mulu National Park
ICameron Highlands - edume ngokutshala kwayo itiye
I-Fraser's Hill - isikhathi esilinganiselwe enkathini yamakoloni
IKinabalu National Park - ikhaya leMount Kinabalu, intaba ende kunazo zonke eSouth East Asia
ILangkawi - isiqhingi seziqhingi ze99 esaziwa ngamabhishi aso, ihlathi lemvula, izintaba, izihlahla zemihlume nemvelo eyingqayizivele. Futhi isiqhingi esingasebenzi
IPenang (Pulau Pinang) - ngaphambili eyayaziwa ngokuthi yi “Pearl of the Orient”, manje esesiqhingi esiphithizelayo ngokudla okuhle okugcine amagugu amakoloni kunanoma yikuphi enye indawo ezweni
I-Perhentian Islands (Pulau Perhentian) - ubucwebe obucwebezelayo oGwini Olusempumalanga namanje bungakatholakali ngokuvakasha kwabantu abaningi
I-Redang (Pulau Redang) - indawo edumile yesiqhingi yabaphambukeli be-scuba
I-Taman Negara National Park - indawo enkulu yamahlathi emvula aseKelantan, ePahang naseTerengganu
UTioman (Pulau Tioman) - owake wakhetha esinye seziqhingi ezinhle kakhulu emhlabeni
Iziphathimandla Zokufika KwelaseMalaysia ziqale ukuprinta izivakashi ngeminwe lapho zifika futhi zisuka e-2011 futhi lezi zeminwe zingathola indlela yazo kubaphathi bezwe lakho noma ezinye izinhlangano ezingekho ngaphansi kukahulumeni.
Ulimi okusemthethweni olusemthethweni lwaseMalaysia yiMalay (ngokusemthethweni iBahasa iMalaysia, kwesinye isikhathi eyaziwa nangokuthi yiBahasa Melayu).
IsiNgisi siyimpoqo kuzo zonke izikole futhi sikhulunywa kabanzi emadolobheni amakhulu, futhi nasezindaweni eziheha izivakashi ezinkulu, yize ezindaweni zasemakhaya iMalawi encane izofika ilusizo.
Izimali zakwamanye amazwe azivunyelwe ukwamukelwa, noma ungahle uhambisane nokushintshana namanye ama-Euro noma amadola aseMelika ngisho nasezindaweni ezikude, kodwa ulindele ukubuka okuningi nokukholisa.
Amabhange nezikhumulo zezindiza akuzona izindawo ezinhle kakhulu zokushintshana ngemali uma kungaphuthumayo. Abaguqula imali abanamalayisense ezindlini ezinkulu zokuthenga bavame ukuba namanani amahle kakhulu - qiniseka ukusho inani ofisa ukulishintsha bese ubuza 'isilinganiso esingcono kakhulu' njengoba amanani aboniswa ebhodini evame ukuxoxiswana, ikakhulukazi ngamanani amakhulu.
Ama-ATM ayatholakala emadolobheni amaningi futhi ngokuvamile amukela iVisa noma i-Mastercard. Qiniseka ukuthi uhlola uphawu lomshini we-ATM olufana nekhadi lakho (njengeCirrus, Maestro, MEPS, njll.). Izikhungo ezinkulu kakhulu emadolobheni amakhulu zamukela amakhadi wesikweletu. Ezindaweni zasemakhaya, ikakhulukazi imali eyamukelwa. Vele ubuze ngaphambi kokuthenga. Abanye, kepha akuzona zonke izitolo nezinto ezikhangayo ezamukela ukukhokhelwa kwamakhadi, noma ngabe wazi ukuthi uma ikhadi lakho lingeyona 'i-chip & iphinikhodi' kungenzeka lingamukelwa.
I-Kuala Lumpur iyi-mecca yezitolo yezingubo, i-elekthronikhi, amawashi, izimpahla zekhompyutha nokunye okuningi, ngamanani ancintisanayo kakhulu nganoma iyiphi indinganiso. Imikhiqizo yasendaweni yaseMalaysian ifaka iRoyal Selangor neBrithani India. Izindwangu zendabuko zaseMalaysian (batik) ziyisikhumbuzo esidumile. Indawo eshibhile yokuthenga kalula izikhumbuzo zezinhlanga (ikakhulukazi ezakhiwe ngokhuni) iseKuching, eMpumalanga neMalawi, futhi indawo ebiza kakhulu isezitolo ezinkulu, i-posh Kuala Lumpur.
Ezitolo ezivulekile zivulwa kusuka ku-10.30AM-9.30PM (noma i-10PM) emadolobheni amakhulu. Izitolo zivulwa futhi zivaliwe ibhizinisi ngaphambili emadolobheni amancane nasezindaweni zasemakhaya.
Ukuthi uzodlani eMalaysia
Abantu baseMalawi bathanda ikofi (kopi) netiye (teh), ikakhulukazi iThwala Teh tarik (“edonsa itiye”), eqanjwe ngemuva kwenkundla yemidlalo ethi 'ukudonsa' esetshenziselwa ukuthulula. Ngokuzenzakalelayo, womabili azonikezwa asashisayo, amnandi nangomuthi wobisi oluhlanjululwe; cela Teh o ukweqa ubisi, indlela yetiye elibilisiwe elenziwe ngetiye, noma itiye lokwenza itiye elingenalo ubisi. Ukuphuza ungenawo ushukela nakancane kuthathwa njengokungajwayelekile, kepha ukucela i-kurang manis (ushukela omncane) kuzodambisa izinhlungu. Kodwa-ke, uma ungafuni ngempela ushukela, ungazama ukucela i- “teh kosong.”
Enye intandokazi yasendaweni eyingqayizivele yi-kopi tongkat ali ginseng, ingxube yekhofi, impande yendawo ye-aphrodisiacal, ne-ginseng enikezwe ubisi oluhlanganisiwe oluhlotshiswe njengenye indlela nge-viagra nenkunzi ebomvu kuhlangene futhi kuvame ukukhangiswa ngesithombe somubhede ophukile ngaphakathi uhhafu.
Ezinye izindlela ezidumile ezingezotshwala ezibandakanya isiphuzo sikashokholethi i-Milo, ujusi we-lime (i-limau), ne-Sirap bandung (isiphuzo se-rose-flavored Milky). Amajusi ezithelo asanda kwenziwa atholakala kabanzi, kanye nohlu olubanzi lweziphuzo zekheni (ezinye ezijwayele, ezinye ezingatheni kangako).
Ngaphezulu futhi, mhlawumbe, okungalungile kwezombusazwe, isiphuzo sendawo esakhiwe ubisi olumnyama soya notshani obumnyama onsundu (cincau) obizwa ngokuthi iMichael Jackson futhi ungabekwa esikhungweni esikhulu kakhulu samawebhu kanye netiye zasendleleni eziseduze komgwaqo (“mamak”)
I-Tuak idliwe kabanzi ngesikhathi somkhosi we-Gawai Dayak kanye noKhisimusi.
Yize iMalaysia ineningi lamaSulumane, utshwala bukhona ngokukhululekile ezindaweni zokudlela, ezinkambeni, emaklabhini asebusuku, ezitolo ezilula, ezitolo ezinkulu kanye nasezitolo zama-hawker ukuze kudliwe izakhamizi zawo ezingewona amaSulumane kanye nezivakashi. Iziqhingi ezingenayo intela njenge (Labuan, Langkawi, Tioman) kanye nezitolo zamahhala (isibonelo eJohor Bahru), amanani ashibhile ngokuqhathaniswa nezinye izifundazwe.
E-East Malaysia, ikakhulukazi iSarawak, i-tuak iyindaba evamile kunoma imuphi umgubho noma imikhosi efana neGawai Dayak nosuku lukaKhisimusi. I-Tuak yenziwa ngelayisi eligayiwe kwesinye isikhathi elifakwa ushukela, uju noma ezinye izimonyo ezihlukahlukene. Ngokuvamile kukhonzwa kufudumele ngaphandle kweqhwa. Izivakashi zingakhetha ukunambitheka 'okuqinile' kwe-tuak (okuvame ukugcotshwa iminyaka), noma ukunambitheka 'okunobumnene' (kwesinye isikhathi okuvele kulungiselelwe isonto noma ngisho nangosuku olwandulela lolu). ESabah, notshwala obungabizi kakhulu batholakala kakhulu ezitolo ezinkulu nasezimakethe ezi-mini kuhulumeni. Ezinye iziphuzo ezidakayo ezinjengobhiya ne-whisky nazo zitholakala kabanzi. Ngakolunye uhlangothi, uTuak eKelantan naye angabhekwa njengotshwala ngoba uqukethe inani lokulandela i-nipah noma ujusi we-sap. Okuqukethwe utshwala kuKelantan tuak kungafinyelela kalula i-50% ngemuva kwezinsuku ze-3 kusukela ngesikhathi kukhishwa.
ITapai, iqukethe umdumbula obilisiwe futhi udliwe njengokudla (yize uketshezi olungezansi nalo lungadakwa).
ISEXWAYISO: IMalaysia iphatha kabi kakhulu izidakamizwa. Isigwebo sentambo siyisibopho kulabo abatholakala benamacala okushushumbisa, ukukhiqiza, ukungenisa noma ukuthekelisa ngaphezu kwe-15 g ye-heroin, i-30 g ye-morphine, i-30g ye-cocaine, i-500g ye-cannabis, i-200g ye-cannabis resin ne-1.2 kg ye-opium. amanani konke okudingekayo ukuze ulahlwe yicala. Ukusetshenziswa okungagunyaziwe, kunenqwaba yejele leminyaka le-10 noma inhlawulo enkulu, noma zombili. Ungakhokhiswa ngokusetshenziswa okungagunyaziwe inqobo nje uma kutholakala imishini yezidakamizwa ezingekho emthethweni ohlelweni lwakho, noma ngabe ungafakazela ukuthi zidliwe ngaphandle kwezwe, futhi ungabekwa icala lokushushumbisa inqobo nje uma izidakamizwa zitholakala emasakeni esesandleni sakho noma egumbini lakho lokulala, noma ngabe kungezona ezakho futhi kungakhathalekile ukuthi uyazazi - ngakho-ke qaphela izimpahla zakho.
Ungalokothi ulethe noma yiziphi izidakamizwa zokuzijabulisa eMalawi, noma umgibeli odlulayo. Ukuxhashazwa kwamanani amancane kakhulu kungaholela ekutheni umuntu agwetshwe isigwebo sentambo.
Ukushayela i-Drunk kuyicala elingathi sína futhi nokuhlolwa kwe-hemalyzer ngamaphoyisa kuvamile. Akufanele unikeze ukufumbathiswa nakancane - uma utholakala unecala ungagwetshwa iminyaka engu-20 ejele! Noma ngubani ozama ukufumbathisa izikhulu zikahulumeni angahle aboshwe khona lapho futhi aboshwe endaweni yokuzivalela ubusuku ukuze akhokhelwe lelo cala ekuseni. Uma lokhu kwenzeka ngoLwesihlanu noma ngosuku lwamaholide omphakathi, uzozithola uchitha ubusuku obuningana lapho kuvalelwa khona izinkantolo njengoba izinkantolo zivulwa kuphela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu. Ungakuvumeli lokhu kukuyekise ekuceleni usizo - ngokujwayelekile amaphoyisa aseMalawi ayasiza kubavakashi. Kufanele wamukele noma yini amasamanisi omgwaqo okhishwa.
Amanzi ompompi ayaphuzwa aqonde ngqo empompini njengoba elashwa (kuya ngendawo), kepha ngisho nabantu bendawo bayabilisa noma bayihlunge kuqala ukuze ube sohlangothini oluphephile. Lapho uhamba kungcono ukunamathela emanzini asebhodleleni, okungabizi kakhulu.
IMalaysia ingelinye lamazwe okuqala emhlabeni ukunikela nge-4G ukuxhumana. I-Wi-Fi yamahhala itholakala kalula cishe kuzo zonke izindawo zokudlela, izitolo zokudla okusheshayo, ezitolo ezinkulu, ukuxhumana kwe-City-wide wireless nakwezinye izitolo ze-hawker. Amakhadi e-Inthanethi akhokhelwa nawo ayatholakala ukufinyelela ku-inthanethi ebanzi engenantambo, kwamanye amakhofi.
UMelaka noGeorge Town, Amadolobha Omlando Wokuqina KwelaseMalacca
Amagugu Ezinto Ezivubukulwa Esigodini SaseLonggong